अनिद्राको लागि क्यानाबिस प्रयोग गर्दै: अनिद्राका लागि मार्गनिर्देशन - व्यक्तिगत विकास क्याफे
अनिद्राको लागि क्यानाबिस प्रयोग गर्दै: अनिद्राका लागि मार्गनिर्देशन
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 5, 2019 | सो |0|
1 अनिद्राको लागि भांग प्रयोग गर्नुको कारण के हो?
1.1 अनिद्रा उपचार गर्न भांग को एक तनाव कसरी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ
1.2 अनिद्रा कामको लागि भांग कसरी प्रयोग गर्दछ?
1.3 राम्रो आरामको लागि मारिजुआना कसरी लिने
1.4 मारिजुआना को उपलब्धता
1.4.1 अनिद्राको लागि क्यानाबिस प्रयोग गर्दै - निष्कर्ष
के अनिद्रालाई भान्सा प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो?
के तपाईंलाई दिनको अन्तमा निदाउन गाह्रो लाग्छ? ठिक छ, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न! वयस्क जनसंख्याको एक पर्याप्त संख्यालाई उनीहरूको जीवनको कुनै समयमा निदाउन गाह्रो र गाह्रो लाग्छ।
राम्रो निद्रा प्राप्त गर्नु स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्नको लागि आवश्यक छ। अझै कोही मानिसहरू यसलाई प्राप्त गर्न असमर्थ छन्; विशेष गरी तनावपूर्ण दिन पछि।
तथ्य यो छ कि धेरै व्यक्तिमा दीर्घकालीन अनिद्रा र अन्य निद्रा विकारहरू वैकल्पिक उपचारको उपयोगको परिणामस्वरूप भएका छन्।
धेरै देशहरू र राज्यहरूले कानुनीकरणको समीक्षा गरिसकेपछि, एउटा उपचार जसले धेरै ध्यान पायो भांग हो।
अनिद्राको लागि भांग प्रयोग गर्नुको कारण के हो?
भांगलाई रमाइलो र निन्द्राको अवस्था जगाउँदछ जुन निन्द्राको लागि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। यो विभिन्न शक्तिहरूमा आउँछ केही ऊर्जावान, शान्त र अन्यहरू बेहोस हुने साथ। तिनीहरूको क्षमता ठूलो हदसम्म विभिन्न cannabinoids को सन्तुलन स्तरमा निर्भर गर्दछ। यो निकाल्न सकिन्छ वा केहि उदाहरणहरुमा, कृत्रिम बनाएको।
भांगको कृत्रिम रूप बिभिन्न पूरकहरू र औषधिहरूमा फेला पर्दछ, जहाँ यो विशेष रूपमा यसको चिकित्सीय क्षमताहरूको लागि निर्मित हुन्छ। दुई धेरै धेरै साधारण क्यानाबिनोइडहरू हुन्:
Cannabidiol (सीबीडी) - धेरै स्वास्थ्य लाभ संग सम्बन्धित छ। सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो गैर- psychoactive छ, यसको मतलब यो छ कि तपाईं महसुस छैन "उच्च"।
टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल (THC) - एक मनोवैज्ञानिक क्यानाबिनोइड हो जुन "उच्च" भावनाको लागि पूर्ण जिम्मेवार हुन्छ। THC निद्रा उत्प्रेरणको साथ पनि सम्बन्धित छ।
त्यसोभए जहाँ तपाईले केही शट-आँखा लिदै हुनुहुन्छ भन्ने अवस्थामा, तपाईले एक इंडिका तनावको लागि जानु पर्छ जसमा CBD भन्दा बढि THC हुन्छ।
भांगले निद्राको समग्र मात्रा बढाउन र अनिद्रालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यस बाहेक, यो सतर्कता उत्प्रेरित गर्न र दिनको निन्द्रा कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको मतलब यो हो कि एकले दिनको प्रदर्शन अधिकतम गर्न सक्षम पारिएको छ निद्रा जगाउने चक्र.
अनिद्रा उपचार गर्न भांग को एक तनाव कसरी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ
भांगको तान छान्नु भनेको चियाको मिश्रण छान्नु जस्तै हुनुपर्दछ। उही तरीकाबाट तपाईं कालो, सेतो, वा संकर चियाको लागि सबै तपाईंको स्वाद र आवश्यकतामा निर्भर गर्न सक्नुहुन्छ। केही सबै भन्दा सामान्य तनाव प्रकार तपाईं भरि आउनुहुनेछ समावेश सहित:
indica- यो तनाव को एक प्रकार हो कि सुखदायक र आरामदायी छ भनिन्छ
सातिवा- यो मिश्रणले मानिसलाई खुशी, उत्साहित, र उत्साहित बनाउँछ।
हाइब्रिडs- सतिवा र इंडिका दुबैको मिश्रण र अधिकतर निर्माताहरू र औषधालयहरूको लागि।
डा। जोर्डन टिशलर, जो हार्वर्ड प्रशिक्षित चिकित्सक हो र क्यानाबिस चिकित्सीय विशेषज्ञ पनि हो, सिफारिश गर्दछ कि उत्तम तनावले 20 प्रतिशत THC भन्दा कम हुनु पर्छ। उनी भन्छन कि यस भन्दा बढि लिनुले न केवल डोजिंग मुश्किल बनाउँछ तर भोलि तपाईलाई नराम्रो र निद्रा लाग्न सक्छ।
कसरी गर्छ अनिद्राको लागि भांगको प्रयोग गर्दै काम?
एक अध्ययन त्यो CBD को 40mg को बारे मा चूहों दिने समावेश थियो भनेर देखायो कि यो खुराक प्राप्त चूहों छैन कि मुसा भन्दा राम्रो निद्रा चक्र थियो।
अन्य अध्ययनहरूले यो पनि दाबी गर्छन् कि THC को एक उच्च स्तरको साथ मारिजुआना तनाव inजेट REM निद्रा को मात्रा कम हुनेछ।
REM निद्रा को कम मतलब के हो? यसको मतलब सपनाहरू कम हुनेछ विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि जुन PTSD को अनुभवको साथसाथ दुःस्वप्नहरू पनि कम गर्दछन्।
तसर्थ, तपाईं गहिरो निद्रामा बढी समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईं सपनामा देखेको समय कम भएको छ। गहिरो निद्राको अवस्था निद्राको अधिक आरामदायी र पुनःस्थापनात्मक हिस्सा हो।
यद्यपि, उच्च स्तरको THC लिनको लागि सावधानी अपनाउनुपर्दछ किनकि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली र संज्ञानात्मक कार्यको लागि REM अझै महत्त्वपूर्ण छ। THC स्तरको उच्च खुराक लिई प्रभाव पार्छ र समयको क्रममा तपाईंको निद्राको गुणवत्ता बिगार्न सक्छ।
राम्रो आरामको लागि मारिजुआना कसरी लिने
गाँजा निषेध गर्ने एक परम्परागत विधि भनेको यसलाई संयुक्त रूपमा वा पाइपको प्रयोग गरेर धुम्रपान गर्नु हो। यद्यपि, भांग पिउने अधिकांश व्यक्तिले यसलाई सुर्तिजन्यसँग मिसाउँछन् जसले अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउँदछ।
यदि तपाईंलाई धुम्रपान वा भांगको गन्ध मनपर्दैन भने, तपाईं अन्य विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै वाफिंग उपकरणहरू प्रयोग गरेर वा टीएचसी-युक्त टिन्चरहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जुन जिब्रो मुनि राखिन्छ।
प्रमुख प्रश्न भनेको तपाईले कति गाँजा प्रयोग गर्नु पर्छ? खुराक एक व्यक्तिको देखि अर्को व्यक्तिको दायरा हो र तपाईको लागि सहि पाउँदा केही समय लिन सक्दछ।
त्यसकारण, तपाईले कामको हप्तामा यो प्रयास गर्नु हुँदैन। तपाईंलाई केहि पफहरू मात्रै सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ किनकि अलि धेरै लामो यात्रा गर्छ र अर्को बिहानी तपाईंलाई बिगार्ने बानीबाट बच्न पनि मद्दत गर्दछ।
मारिजुआना को उपलब्धता
मारिजुआना को राम्रो हिस्सा यो सजिलै संग उपलब्ध छ। तिमी सक्छौ झारपात अनलाइन किन्नुहोस् र अन्य स्थानहरू जहाँ यो कानूनी छ यसको फाइदाहरू उपभोग गर्न। जहाँसम्म, तपाईले आफ्नो स्थानीय औषधालयमा जाँदै गरेको तनावको उपलब्धतामा तपाईले गहन अनुसन्धान गर्नु पर्छ।
अनिद्राको लागि क्यानाबिस प्रयोग गर्दै - निष्कर्ष
गाँजा लिनु भनेको निद्राको स्वाभाविक विधि होइन।
यो स्वस्थ जीवनशैलीको लागि निद्राको महत्त्व अधोरेखित गर्न सकिदैन। यसको कारण यो हो जब तपाईं गहिरो निद्रामा हुनुहुन्छ जुन तपाईंको शरीरले सुधार गर्न सक्दछ।
भांग शताब्दीयौंदेखि पीडा र मतली कम गर्न, निद्रा सहायताको रूपमा र अन्य मुड समस्याहरू कम गर्न प्रयोग गरिएको छ। इनसोमियाका व्यक्तिले यी समस्याहरूको उपचार गर्न भांगको प्रयोगबाट फाइदा लिन सक्दछन्।
यद्यपि सावधान हुनुहोस् यो सम्भव छ भांगको प्रयोगलाई सवहार बनाउनको लागि र यसले नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ मानसिक सुस्वास्थ्यविशेष गरी मानिसहरुमा जो चिन्ता वा अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु को लागी संवेदनशील हुन सक्छ।
पछिल्लोप्राकृतिक उपचारको साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्दै
अर्कोक्यान्सरको उपचार गर्ने अपारंपरिक तरिकाहरू
सुत्न समस्या भइरहेको छ?5उत्तम सुझावहरू
कसरी राम्रो रातको आरामको लागि निदाउन
निद्रा विकारहरू र पोषणको सकारात्मक प्रभाव
सुरु गर्न को लागी बोल्न छोड्नु र शुरू गरिरहनु हो।
- वाल्ट डिज्नी